Home Wararka Safarkii Kheyre oo Fashil ku soo Dhamaaday iyo Kacdoon Hoostiisa ka Bilowday....
Safarkii Kheyre oo Fashil ku soo Dhamaaday iyo Kacdoon Hoostiisa ka Bilowday. Ogow!
RW Kheyre wajigabax iyo filan waa ah inysan soo dhoweyn deyn cafis oo tubtii lagu gaari lahaa laga beyray goor hore oo 2017 ah ayuu kala kulmay kulan uu la qaatay madaxa Sanduuqa lacagta adduunka (IMF), Cristine Lagarde.
Ra’iisul Wasaaraha iyo Cristine Lagarde ayaa kulankooda iskula soo qaaday horumarrada ay Soomaaliya ka sameysay dhanka hagaajinta nidaamka maaliyadda ee soobilowday 2013 iyo xaqiijinta himilooyinka lagu gaari karo in Soomaaliya deynta laga cafiyo, balsa aan hadda loo joogin.
Wafdiga Ra’iisul wasaaraha oo ay ka mid yihiin Wasiirrada Maaliyadda iyo Qorsheynta, Guddoomiyaha cusub Bangiga dhexe oo ah seedi la jecel yahay , jeebkana uu kala oo baxay Kheyre, Hanti dhowrka Qaranka iyo xubno kale ayaa sidoo kale waxay kulamo isdaba joog ah la yeelanaya hay’addaha maaliyadda dunida ee ku kulansanaa shir sannadeedka Guga oo ay si wadajir ah u qabtaan Bangiga aduunka iyo Sanduuqa lacagta aduunka (IMF).
Wasiirka qorsheynta ayaa faafiyey warar aan sal iyo raad toona lahayn oo uusan ogeyn in laga dabategi doono sidii looga daba tagay beentii shahadooyinkiisa, kaas oo sheegay in Somaliya ay ka soo baxday shuruudihii deyn cafinta, dhawaanna la filayo in go’aanno laga soo saaro.
Hasa yeshee madaxa Sanduuqa qoraal ay soo dhigtay barta Sanduuqa ayey ku sheegtay in hadda iyo kadib laga fekeri doono barnaamij kale oo arrintaan looga hadlayo, taas oo cadeyneysa in hadda ka hor aysan waxba qabsoomin.
Haddaba Maxaa ka qabsaday Shirar hoosaadkii Bangiga ay xubnahooda yeeshaan RW KHeyre? Intii uu joogay Washigton Kheyre waxaa ka qabsaday dhacdooyin dhowr ah oo u keenay ceeb iyo inuusan ahayn ruxa uu isu haysto.
Waxaa uu kor iyo bari u dhex socday qolalaka shirarka sidii inuu yahay wasiir hoose oo kolba qolkee lagu shirayaa leh. Mar uu ka qeyb galay dood loo qabtay wasiirro ayuu wuxuu xataa illoobay inuu fadhiisto kursi loo qoodeeyey oo meel gees ah xigay si uu u diriqsado inuu ka ag dhawaado shir guddoonka ayuu ku booday kursi uusan lahayn. Runtii laguma dayan oo lama oran miiskaaga waa kaas balsa waa laga xishooday oo laga soo daba tuuray looxii magaciisa ku dhignaa oo yaallay kursigii loogu talagalay.
Markii hadalka la siiyey wuxuu ka baxay wixii laga hadlayey oo isaga ayaa faan isuka dhaqaaqay inuusan wax shaqo ah ku lahayn Somalidii hore iyo dowldii hore ee uu yahay Somalida Cusub, taasina waxay keentay inaan xataa wax laga siinin doodda maadama uu mowduuca bannaanka ka ahaa. Hal mar ayaa su’aal la weydiiyey, waana mar kaliya ee uu soo galay hadalka.
Haddaba akhristow Socdaalka RW maxaa ka soo baxay?
Waxaa ka soo baxay inuu isaga is gadayo oo faan meel walba isla soo taago, waxaana xantu leedahay waa Musharrax 2020, waxaanu kulan la qaatay koox ka mid ah kuwa baraha bulshada wax ku caaya oo uu kala soo hadlay sidii loo buunbuun lahaa.
Waxaa been noqotay inuu jiro deyn cafis ay Somaliya ka sugeyso isaga, shirka uu tagayna ma iman hal madaxweyne ama RW ee waxaa isugu yimid wasiirro hoose oo waxaa kaga haboonaan lahayd inuu diro Marwo Khadiija Diiriye oo si wacan uga qeyb qaadan lahayd dooda uu ku fashilmay ee ku saabsaanayd sinaanta shaqo ee ragga iyo dumar ee qaaradda Afrika.
Waxaa uu ku baxday lacag dhan $400,000 si a isula sawiro John Bolton oo isagaba ah bidhaan gebi laalaadda oo la taliye u ah MW aan la isku hallayn Karin, horayna ay la taliye uga tageen. Waxaa kaloo kharasha ilaa nus milyan ah ay ku baxday safarka iyo hoteellada qaaliga ah ee aan dan Somaliyeed loo tagin iyadoo ay ciidamadii ay mushaar la’aan difaaca uga soo baxeen.
Haddaba Xasan Cali kheyre waa taas garashadiisa qofkii ka sugaya inuu dal dowladiisa hogaamiyo. Hogaamiyaha mas’uulka ah waa kan dhibsada dhibaatada umaddiisa ku dhacda ee maaha kan amraa in la soo xerxero dhallinyaro qorraxda soo istaagay shalay ee yiri war waxaan cunno ayaan la’anahay ee aan shaqeysanno kadibna xabad lala dhacay, xalayna la soo xaabiyey oo jeelasha lagu guray. Halkaan ka eeg
Hubaal waaye in RW Kheyre, MW Farmajo, Fahad Yaasin iyo Yariisow oo si xawli ah ugu tartamaya dhibaateynta shacbiga Muqdisho aysan la fogaan doonin, bixinna doonaan dhibtii ay u geysteen shacabka masaakiinta ah.
Previous articleBeesha Caalamka oo go’aansatay in ay taageeradii Baarlamaanka FS u weeciso Dowlad Goboleedyada! Maxaa is badalay? (Xog)
Next articleAskari dilay wiil bajaajle ah oo Madaxtooyada lagu qarinaayo (AQRISO)